Google inotarisira kubvisa ma URL pawebhu kuitira zvakanaka zvese Linux Vakapindwa muropa
Google inotarisira kubvisa ma URL pawebhu zvakanakira vese
Chrome, webhusaiti yewebhu yeAmerican tekinoroji hofori Google, yagadzirisa zvakawanda kubvira payakatangwa, zvimwe zvine hunyanzvi kupfuura vamwe.
Mwedzi mishoma yapfuura, Google yakafunga kuti echinyakare mawebhu kero kana ma URL anofanirwa kutsakatika nekuda kweinternet uye zvinoita sekunge kambani yekuAmerican yatove yekutanga kuita basa iri.
Muhurukuro Chipiri chapfuura kuEnigma Bay Area Safety Conference, Chrome chengetedzo Executive, Emily akasimba, yakaburitsa dzimwe nhau nezve kufambira mberi kwatoitwa nevagadziri veGoogle kuti vafungisise pfungwa ye "URLs" pawebhu.
Stark Anotsanangura kuti hachisi chinangwa cheGoogle kubvisa ma URL, asi kuti zviite kuti awedzere kusimba.
Chaizvoizvo Google ane pfungwa dzekugadzira ma URL anonyatsoratidza kuzivikanwa kwenzvimbo iyi kudzivirira vashandisi kubva mukuwira pasi kune vanhu vane huipi.
Vatsvagiri havasi kukurudzira shanduko muwebhu webhu, asi ndoda kuti ugadzirise nzira mabhurawuza aunopa webhusaiti iwe yauri kuona, saka haufanire kubata nehurefu uye marefu ma URL. kuvapoteredza.
1 Google iri kutoshanda pabvunzo dzemukati
1.1 Yekufamba kwakachengeteka uye kune hutano
Google iri kutoshanda pabvunzo dzemukati
Stark inoshuma kuti timu yeChannel iri kutoshanda pamapurojekiti maviri kujekesa kune vashandisi kuzivikanwa kwenzvimbo dzavanoshanyira.
Iyo yekutanga chirongwa ndeye yakavhurwa sosi chishandiso inonzi Kunyengera que inobatsira vanogadzira kuti vaone kuti yavo software inoratidza ma URL nenzira kwayo uye zvinowirirana.
Iyo yechipiri chirongwa ndechekugadzwa kweyeyambiro system iyo inozivisa vashandisi kana iyo URL ichitaridzika kunge inofungidzira.
Emily Stark anoti izvo, kwenguva, purojekiti yechipiri ichiri kuyedzwa mukatiNekuti chinetso chazvino chakatarisana nevanhu paGoogle chiri kukwanisa kugadzira nzira dzekusiyanisa otomatiki nzvimbo dzakashata kubva kunzvimbo dzepamutemo.
"Iyo nzvimbo yese iri kunetsa chaizvo nekuti ma URL anoshanda chaizvo kune vamwe vanhu uye vanoshandisa makesi izvozvi, uye vanhu vazhinji vanovada."
"Tiri kufara nekufambira mberi kwatakaita neyakavhurika sosi yakavhurwa sosi yekuona URL chishandiso TrickURI uye neyedu nyowani yekuongorora pane akavimbika ma URL." anodaro Stark.
Yekufamba kwakachengeteka uye kune hutano
Parizvino, iyo yakachengeteka kubhurawuza iyo Chrome inopa ndiyo yekutanga mutsara wekuzvidzivirira kubva kune phishing uye zvimwe zvepamhepo zvekubiridzira kune vashandisi vayo.
Asi Emily Stark nechikwata chake chevaongorori varikufunga nezve mawaniro ekuwedzera kune ino yakachengeteka kubhurawuza, plugins ayo anonyanya kutarisa kumaka chunks
Izvi zvicharatidza vashandisi izvo URL zvinhu zvinoenderana nekuchengetedzeka kwavo pamhepo uye kuita sarudzo, uku vachisefa neimwe nzira kana zvimwe zvese zvinowedzera izvo zvinoita kuti ma URL anetse kuverenga.
Pakupedzisira Iyo Chrome timu yatogadzirisa zvinoverengeka matambudziko eInternet ekuchengetedza, imwe yacho ndeyekuti yakange yashandisa huremu hweGoogle kutyaira kugamuchirwa kwepasirese kweHTTPS web encryption.
Zvino fungidzira kuti nzira imwechete inogona kushandiswa yeiyi purojekiti nyowani yavanayo nema URL, asi vamwe vanotya kuti maitiro ekuratidzira kuzivikanwa kwewebsite anongobatsira chete Chrome uye kwete chaizvo kune iyo yese yewebhu.
Nekudaro, Emily Stark anoti ivo vanogutsikana nekufambira mberi kwakaitwa parizvino uye zviri pachena kuti Google haizomire ipapo sezvavanoona kuti ichi chichava chinhu chakanyanya kunaka.
"Izvo zvatiri kutaura nezvazvo kushandura mataurirwo anoitwa saiti iyi," akadaro Star.
Panosara chete nemubvunzo wekuti zvese zvinowedzera zveGoogle zvichabatsira kune rese rewebhu nharaunda uye kuti vanove nechokwadi chewebhu chengetedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google inotarisira kubvisa ma URL pawebhu zvakanakira vese
Musoro: Google inotarisira kubvisa ma URL pawebhu… Gare gare: Google haina chinangwa chekubvisa ma URL… Tasiiwa kupi? Izvo hazvisi zvekushoropodza mahara, asi zvinonetesa kuona clickbait pese pese, yave tsika yakajairika. Ini ndinoedza kusatonga uye ndinofungidzira kuti kune iye anogadzira zvemukati zvinofanirwa kunge zvichinetsa kukwezva vashanyi, kunyanya zvakadaro nemakwikwi anhasi uye neyakajairwa tsika yekudzvanya, asi ngatitsvagei chiyero. Ndingadai ndakapinda zvakafanana nezita risinganyanyo kunetseka. Zvakare, ini handifunge kuti iyi svikiro yakanangana nevateereri vakawanda. Kubva ta ndatenda kune iyo blog!
Kubatana kunovhura Chipingamupinyi Shongwe Dambudziko uye Kubatana Nhandare
Iyo yakagadzikana vhezheni yaLutris 0.5 ine GOG rutsigiro ikozvino yagadzirira